कार्यकर्ता पोस्न फेरि अर्को आयोग ! - Baikalpikkhabar
कार्यकर्ता पोस्न फेरि अर्को आयोग !
पहुँचवालाहरूले नै सरकारी जमीन हडप्ने हुँदा यसअघिका अध्ययनका सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा यो पटकको शक्तिशाली भनिएको आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी भने भट्टराई आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन, “मिचिएका सार्वजनिक जग्गा खोज्न सरकारलाई दबाब छ, र त्यसप्रति इच्छाशक्ति उच्च भएकाले नै अहिले शक्तिशाली आयोग गठन भएको हो ।”
२०६६ साल असोजमा सरकारले घनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धी अर्को उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्‍यो । भूमिको उपयोग, संरक्षण, भूमिमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य, वैज्ञानिक हदबन्दी, उत्पादकत्व वृद्धि र भूमि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यो आयोगले बुझएको सुझव सहितको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएन । बस्नेत आयोगले घरघडेरीका लागि एक व्यक्तिले देशभरि अधिकतम ६ रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने सुझव दिएको थियो । भूमिहीन किसान परिवारलाई जग्गा वितरणको उद्देश्य सहित जग्गामा हदबन्दीको प्रयास धेरै अघिदेखि शुरू भए पनि सफल हुनसकेको छैन ।
जग्गाको लगत राख्ने वैज्ञानिक प्रणालीको अभाव, कृषि फर्मका नाममा हदबन्दी नलाग्ने प्रणाली र आफन्तका नाममा जग्गा लुकाउने प्रवृत्तिबाट त्यसबेला अधिकांश जमिनदारले फाइदा उठाएका थिए । ३२ साउन २०५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमिसुधारका लागि जग्गाको हदबन्दी घटाउने घोषणा सहित भूमिसुधार कार्यक्रमको घोषणा गरे । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा पाँचौं संशोधन गर्दै सरकारले यसअघिको जग्गाको हदबन्दीलाई घटाएर खेतीका लागि तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी तथा पहाडमा ७० रोपनी कायम गर्‍यो ।
त्यस्तै, बसोबासका लागि तराईमा १ बिघा, बाँकी स्थानमा ५ रोपनी कायम गरियोे । तर, यस्तो हदबन्दीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भूमिहीनलाई वितरण गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्त हुन सकेन । भूमिविज्ञ जगत बस्नेत अधिकांश आयोगहरूलाई कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो बनाइने र आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भइदिंदा भूमिसुधारको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहेको बताउँछन् । “भूमिसुधारको मुद्दा वर्गीय विषय समेत भएको हुँदा आयोगका सिफारिशहरू कार्यान्वयन नभएर थन्किएका हुन्”, बस्नेत भन्छन् ।
सोमबार, ०९ असार, २०७६, बिहानको ०८:४० बजे